कोभिसिल्ड खोपको विकल्पमा एस्ट्राजेनेका लगाउने सरकारको तयारी « Mero LifeStyle
कोभिसिल्ड खोपको विकल्पमा एस्ट्राजेनेका लगाउने सरकारको तयारी
मेरो लाइफस्टाइल	|| 28 May, 2021
सरकारले अबको केही दिनमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप ल्याएर ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने भएको छ । कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभाव भइरहेका बेला सरकारले हप्ता १० दिनमा खोप ल्याएर ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न थालेको हो । त्यसका लागि सरकारले विभिन्न खोप उत्पादक मुलुकसँग खरिदका लागि छलफल गरिरहेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले शुक्रबार स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले गरेको ‘नेपालमा खोपको उपलब्धता र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा हप्ता-दश दिनमा खोप आयात गरेर ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने बताएका हुन् ।
सरकारले करिब एक करोड खोप खरिद गर्न लागेको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले चीनको सिनोफर्म र अमेरिकाको जोनसन एण्ड जोनसन कम्पनीबाट ५०-५० लाख मात्राका दरले खोप खरिद गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
‘खोप खरिदमा हामी केही दिनमा निष्कर्षमा पुग्दैछौँ । १० दिनमा नभए पनि त्यसको थोरै एकदुई दिन अघिपछि ‘ब्रेक थ्रु हुन्छ’, उनले भने, ‘खोप सहायता दिने केही मुलुकले पनि हप्ता-दश दिनभित्रमा घोषणा गर्दैछन् । खोपमा केही न केही प्रगती हुनेछ ।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चीनका राष्ट्रपति सि चिन फिङबीच भएको टेलिफोन संवादपछि चीनले नेपाललाई १० लाख मात्रा भेरोसेल खोप उपलब्ध गराउने भएको छ ।
उनले खोप खरिदका लागि चीन, अमेरिका, रुस र बेलायतसँग सरकारले उच्चस्तरीय संयन्त्र परिचालन गरेको बताए । उनकाअनुसार सरकारले चीनको सिनोफर्म, अमेरिकाको जोनसन एण्ड जोनसन, रुसको स्पुतनिक भी उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग र बेलायत सरकारसँग पत्राचार गरिसकेको छ ।
सरकार ती मुलुकमध्ये चीन र अमेरिकाबाट खोप ल्याउन केन्द्रीत रहेको उनको भनाई छ । उनले सन् २०२१ भित्र लक्षित समूहलाई खोप लगाउने सरकारको योजना रहेको बताए । सरकारले कुल जनसंख्याको ७२ प्रतिशत मानिसलाई खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ ।
पहिलो मात्रा ‘कोभिसिल्ड’ लगाएका साढे १४ लाखले खोप अभावले अहिले दोस्रो मात्रा लगाउन पाएका छैनन् । भारतको सिरम इन्सिच्युटले सरकारले खरिद गरेको १० लाख मात्रा खोप उपलब्ध नगराएपछि दोस्रो मात्राको खोप रोकिएको छ ।
उनले खोप खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयले ३६ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरिसकेकाले सरकारले खोप जतिसक्दो चाँडो खरिद गर्ने बताए । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतबाट समयमै सरकारले खरिद गरेको १० लाख खोप नआएकाले अहिले दोस्रो मात्रा लगाउन नपाइएको बताए ।
भारतसँग उच्च तहमा वार्ता
मन्त्री ज्ञवालीले भारतबाट ‘कोभिसिल्ड’ ल्याउनका लागि नेपालले उच्च तहमा छलफल गरिरहेको जानकारी दिए । ‘केही दिन अघिमात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतका राष्ट्रपतिलाई हामीले पैसा भुक्तान गरिसकेको १० लाख खोपको मात्रा र थप सात लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नका लागि आग्रह गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘खोप उपलब्ध गराउन भारतलाई प्रधानमन्त्री र मेरो तहबाट पनि आग्रह गरेका छौँ । नेपालका लागि भारतका राजदूत र भारतस्थित नेपालका राजदूतसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ । हामीले औपचारिक– अनौपचारिक रूपमा भारतसँग कुरा गरिरहेका छौँ ।’
भारतबाट खोप नआएका खण्डमा कोभिशिल्डसँग मिल्दोजुल्दो खोप खरिद गर्न पनि सरकार तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । एस्ट्राजेनेका उत्पादन हुने मुलुकसँग खोप ल्याउने पहल भइरहेको उनको भनाइ थियो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बेलायती विदेशमन्त्रीसँग केही दिन अघिमात्र नेपालमा खोपको अभावलाई गम्भीरतापूर्वक लिन ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए ।
मन्त्री ज्ञवालीले नेपालमा खोप आयात गर्नका लागि भारतीय अदालतले पनि मानवीय संवेदनशीलतालाई बुझेर आफूले गरेको आदेशमा पुनःविचार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । भारतको अदालतले भारतका जनतालाई लगाइसकेपछि मात्र बाहिरी मुलुकमा खोप निर्यात गर्न आदेश दिएको छ ।
उनले भारतबाट खोप नआएका खण्डमा कोभिशिल्डसँग मिल्दोजुल्दो खोप खरिद गर्न पनि सरकार तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । एस्ट्राजेनेका उत्पादन हुने मुलुकसँग खोप ल्याउने पहल भइरहेको उनको भनाइ थियो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बेलायती विदेशमन्त्रीसँग केही दिन अघिमात्र नेपालमा खोपको अभावलाई गम्भीरतापूर्वक लिन ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए ।
उनले अमेरिकाले खरिदका लागि सम्झौता गरेको (बुक) एस्ट्राजेनेका नेपालमा ल्याउनेबारे अमेरिकी विदेश उपमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको बताए । ‘अहिले अमेरिकासँग ६ करोड मात्रा एस्ट्राजेनेका खोप बुक र मौज्दात रहेको छ । अमेरिकाले अरु खोप लगाइरहेकाले एस्ट्राजेनेका लगाएको छैन’, उनले भने, ‘त्यहाँ प्रयोग नहुने तर हामी त्यसै खोप नपाएर छटपटिने अवस्था अन्त्य गर्नका लागि नेपालमा खोप अभाव एकदमै छ भनेर हामीले अमेरिकालाई एस्ट्राजेनेका उपलब्ध गराइदिनुहोस् भनेका छौँ ।’
यद्यपि नेपाललाई एस्ट्राजेनेका खोप उपलब्ध गराउनका लागि अमेरिकाको प्रक्रिया लामो हुने भएकोले केही समय लाग्ने बताए ।
उनले खोपको असमान वितरण भएकाले नेपालले समयमा खोप खरिद गर्न नपाएको जानकारी गराए । ‘९५ प्रतिशत खोप १५ देशमा सीमित छ । बाँकी १६० देशले पाँच प्रतिशत खोप आफ्ना नागरिकलाई लगारहेका छन’, उनले भने , ‘हामीजस्ता विकासशील देशलाई खोपको समस्या परेको छ । त्यसैले खोपको नीतिमा परिवर्तन गरेर समान वितरण गर्नु जरुरी छ ।’
कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. तारानाथ पोखरेलले भारतबाट कोभिशिल्ड खोप नआए पनि त्यसको विकल्पमा एस्ट्राजेनेका लगाइने जानकारी गराए ।
उनले खोपको न्यायोचित वितरण गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ र विश्व स्वास्थ्य संगठनमा पहल गरिरहेको जानकारी दिए । खोपको न्यायोचित वितरण नहुँदा खरिद गर्न समस्या परेको उनको भनाइ थियो । उनले अमेरिकासँगै एस्ट्राजेनेका खोप ल्याउनका लागि अन्य देशसँग पनि छलफल गरिरहेको बताए । ‘एस्ट्राजेनेका खोप मौज्दात रहेका देशलाई समेत हामीले पत्राचार गरिसकेका छौँ’, उनले भने, ‘एस्ट्राजेनेका खोप उपलब्ध गराउन हामीले सबै कूटनीतिक प्रयास गरिरहेका छौँ ।’
मन्त्री ज्ञवालीले खोप खरिदका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा देखिएका समस्यालाई हटाएको भन्दै अब सरकार–सरकार र सरकारले सिधै कम्पनीसँग छिटो प्रक्रियाबाट खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।
कोभिसिल्डको विकल्पमा एस्ट्राजेनेका
कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. तारानाथ पोखरेलले भारतबाट कोभिसिल्ड खोप नआए पनि त्यसको विकल्पमा एस्ट्राजेनेका लगाइने जानकारी गराए ।
‘पहिलो मात्रा कोभिसिल्ड लगाएकालाई दोस्रो मात्रा पनि सोही खोप लगाउने हाम्रो प्रयास हुनेछ’, उनले भने, ‘यही कोभिशिल्ड पाइएन भने कोभिशिल्डसँग मिल्दोजुल्दो एस्ट्राजेनेका खोप लगाउँछौँ ।’ उनले कोभिसिल्ड र एस्ट्राजेनेका खोप एउटै कम्पनी र एउटै फर्मुलामा बनेकाले लगाउन केही फरक नपर्ने बताए ।